काठमाडौमा भुकम्पको ठूलो झड्का महसुस लमजुङ घेर्मुका उमा गुरुङ घाईते – Krazy NepaL
काठमाडौमा भुकम्पको ठूलो झड्का महसुस लमजुङ घेर्मुका उमा गुरुङ घाईते
May 19, 2021 462
काठमाडौँ, जेठ ५ । आज बिहान काठमाडौ‌ लगायतका आसपासका अन्य भागमा भूकम्पको कडा धक्का महसुस भएको छ ।
आज बिहान करिब ५ बजेर ४५ मिनेटमा भूकम्पको धक्का गएको हो । राष्ट्रिय भूकम्प मापन केन्द्रको अनुसार बाँकि विवरण आउन बाँकी छ ।
आज बिहान गएको भूकम्पले घर भत्काउँदा एक जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।
लमजुङको वेसीशहर नगरपालिका वडा नं ६ चनौटेमा भूकम्पले घर भत्काउँदा लमजुङ घेर्मुका उमा गुरुङ घाईते भएकी छन् ।
उनलाई उपचारका लागि लमजुङ जिल्ला आस्पतल लगिएको बताइन्छ ।
आज बिहान ५ः४२ बजे लमजुङको भुलभुले केन्द्रविन्दु बनाएर ५.८ रेक्टरस्केलको भूकम्प् गएको थियो
अनलाइनको आशै छैन, पशुचौपाया चराउँदै बित्छ विद्यार्थीको दिन !
जाजरकोट- नलगाड नगरपालिका–८ की लक्ष्मी केसीको समय दैनिक बिहान बेलुका बाख्रालाई चरिचरन क्षेत्रमा लैजाने र ल्याउँदैमा बित्छ । उनी अहिले कक्षा १० मा पढ्दै छन् । शहर बजारमा अनलाइनबाट कक्षा लिएको कुरा फोनमा थाहा पाएपछि उनको मन भक्कानिएर आउँछ तर लक्ष्मीको घरमा मोबाइल चार्ज गर्नेसम्मको विद्युत छैन । गाउँमा सोलारबाट चार्ज गरेर ल्याएको मोबाइलमार्फत साथीहरूलाई फोन गरेर पढाइका विषयमा बुझ्नुबाहेक लक्ष्मीले केही गर्न सक्ने अवस्था नभएको बताए ।
उनी भन्छन्, “गाउँमा विद्युत, इन्टरनेट तथा टिभी केही पनि छैन, कसरी वैकल्पिक उपाय अपनाएर पढ्नू । बाख्रा चराउन जङ्गल गएर पढाइ चौपट भयो ।” उनीजस्तै बारेकोट गाउँपालिका–५ पाखाका गणेशविक्रम शाहीको पीडा पनि कम छैन । दैनिक आमाबुवासँग घरको काम गर्नेदेखि पशुचौपायालाई घाँस जम्मा गर्नु नै उनको दैनिकी बनेको छ । उनको गाउँमा एक महिना अघिसम्म फोनको टावर थिएन, बल्ल नमस्तेको टावर निर्माणपछि साथीभाइ तथा शिक्षकसँग सम्पर्क गर्ने वातावरण सिर्जना भएको छ ।
विद्युत नहुँदा भर्खरै किनेर ल्याएको मोबाइलसमेत चार्ज गर्न विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको शाहीले बताए। शहर बजारमा टिभी र अनलाइनमार्फत कक्षा सञ्चालन भए पनि गाउँमा त्यो शिक्षाको प्रभाव कुनै पनि नपरेको उनले जानकारी दिए।
सदरमुकाममा विद्युत्को केन्द्रीय लाइन विस्तारसँगै इन्टरनेट सेवा हुँदा विद्यार्थीहरुले प्रविधिको भरपूर मात्रामा सदुपयोग गरे पनि दूरदराजमा बस्ने विद्यार्थीहरु भने पशुचौपायाको भरपर्दो आहार खुवाउने साथी भएको विद्यार्थीहरु बताउँछन् । “गाउँमा घुम्दा कोरोनाको डर, कुनै काम नगरेर घरमा बस्न पनि समस्या छ, त्यसैले सकेको काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ”, जुनिचाँदे गाउँपालिका–७ लुहादहका कमान खड्काले भने।
यो सबै सङ्ख्यामा रहेका विद्यार्थीले सरकारद्वारा गरिएको प्रसारण शिक्षाको सदुपयोग गर्न सकेका छैनन् । सूचना अधिकारी भट्टराईका अनुसार अनलाइनलगायत वैकल्पिक माध्यमको सिकाइका लागि विभिन्न माध्यमबाट काम चालु रहे पनि सबै स्थानका विद्यार्थीसँग प्राविधिको पहुँच नभएकाले समस्या भएको बताए । शिक्षा ऐन, २०२८ (नवौँ संशोधन) को दफा १९ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी संशोधित नियमावलीको नियम ८४ को (१ मा “महामारी वा अन्य विपद् वा विकट हिमाली क्षेत्रका कारण शैक्षिक सत्र परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्था आएमा मन्त्रालयले गर्न सक्नेछ”, भनिएको छ । कर्णालीका कालीकोट, जुम्ला, डोल्पा, मुगु र हुम्लामा फागुनदेखि शैक्षिक सत्र शुरु हुँदै आएको छ । कर्णालीका अन्य जिल्लामा मात्र वैशाखमा नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुने गर्दछ ।
Prevबधाई आज रमेश प्रसाई र नन्दा सिंह छिट्टै बाबा आमा बन्न पाउदा रमेशको खुशीको सिमा रहेन, भिडियो सहित
Nextपशुपतिनाथमा कलिको मूर्ती पुरै निस्किएपछि संसार ध्वस्त हुने…के यो सत्य हो ?
” हामी प्रचण्डलाई साथ दिन्छौं ओलीलाई १ मिनेट पनि पदमा राख्न मिल्दैन भन्दै बाबुराम र गगनको १ नै बोलि “
“जापानमा सरकारी योजनामा गएका नेपाली कामदारहरूमाथि ‘शोषण'”